IPakistan iqede ngamaProteas ngosuku lwesine - Impempe
IPakistan iqede ngamaProteas ngosuku lwesine
January 29, 2021 Impempe.com
IPakistan ishaye iNingizimu Afrika ngamawikhethi ayisikhombisa kwiTest yokuqala, osukwini lwesine eNational Stadium, eKarachi, ePakistan ngoLwesihlanu.
AmaProteas awabhethanga kahle neze kule Test kusukela ewine ithosi akhetha ukubhetha ngoLwesibili. Kwi-innings yokuqala akwaze ukwenza ama-run angu-220 kuphela akhishwa wonke. Umdlali owenze kangcono kule innings uDean Elgar ohlanganise ama-run angu-58.
Iphendula iPakistan yenze kangcono kakhulu kuneNingizimu Afrika ishaya ama-run angu-378. Lokhu bekusho ukuthi iNingizimu Afrika bekumele ibhethe kahle kwi-innings yesibili kodwa yahluleka yancama ukwenza lokho.
Iqembu lakuleli likhishwe lonke lisenze ama-run angu-245 nobekusho ukuthi iPakistan ibidinga ama-run angu-88 kuphela ukuze iwine iTest yokuqala. Kwi-innings yesibili yamaProteas u-Aiden Markhram uyena umdlali owenze kangcono eshaya ama-run angu-74. IPakistan izihambele kalula kwi-innings yesibili, yawina umdlalo wokuqala yahamba phambili ngo 1-0 kulolu chungechunge lwemidlalo emibili.
AmaProteas kuzomele abhukule kwiTest yesibili eqala ngoFebhuwari 4 uma ezimisele ngokungalahlekelwa yilolu chungechunge lwemidlalo. Ngemuva kwemidlalo yamaTest emibili kuzoqala eyeT20 ngoFebhuwari 11.
Previous Previous post: Useveze isizathu esenze walidayisa iqembu uMulaudzi weTTM
Next Next post: OweSharks akanalo uvalo ngeBulls koweCurrie Cup